आइफोन कि सामसङ, कसको ब्याट्री धेरै टिक्छ ?
एजेन्सी । हरेक वर्ष विश्वका दुई ठूला स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी आइफोन र सामसुङबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । यसमा एन्ड्रोइड र आइफोन प्रयोगकर्ताहरुले दुवै फोनका विशिष्ट फिचरहरु तुलना गरी कुन धेरै टिकाउ, सहज र राम्रो भन्नेमा विवाद गर्ने गरेको पाइएको छ ।
हरेक सेप्टेम्बरमा एप्पलले नयाँ मोडलका आइफोन लन्च गर्दै स्मार्टफोनको दुनियाँमा नयाँ उपलब्धि हासिल गर्ने गर्दछ भने त्यसैको केही महिनामा सामसुङले पनि नयाँ ग्यालेक्सी सार्वजानिक गर्दै आइफोनलाई कडा जवाफ दिने गरेको छ । यसरी दुवै फोनका आ–आफ्ना विशेषता छन् र भिन्दा भिन्दै पक्षमा दुवैलाई उत्कृष्ट मानिन्छ ।
यस्तोमा सामसुङ र एप्पलको ब्याट्री सम्बन्धि विवादलाई भने अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको छ । ब्याट्री मोबाइलको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भएको हुँदा स्मार्टफोनका प्रत्येक नयाँ मोडलसँगै ब्याट्री टिक्ने समय पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । युट्युब च्यानल ‘फोनब्लफ’ ले एप्पलको नयाँ आइफोन एक्सएस म्याक्स र सामसुङ ग्यालेक्सी एस–टेन प्लसका ब्याट्री परीक्षण गरि नयाँ खुलासा गरेको हो । आइफोन एक्सएस म्याक्सको ब्याट्री ३,१७४ एमएएच भएको बताइएको छ भने सामसुङ एस–टेन प्सलको ब्याट्री क्षमता ३,१०० दाबी गरिएको छ ।
यसरी परीक्षणका क्रममा दुवै फोनलाई एकदिनभर चलाइएको हो जसका लागि हामीले दैनिक फोन चलाउने शैली अपनाइएको थियो । जस्तै कम्तिमा पनि १ घण्टा फोनमा कुरा गर्ने, म्यासेज गर्ने, इमेल तथा विभिन्न वेबसाइटहरु खोल्ने, गेम खेल्ने, गीत सुन्ने, एप चलाउने लगायत सबै काम दुवै फोनमा बराबर गरिएको थियो । यस्तोमा लगातार २४ घण्टा चलाएपछि आइफोन बन्द भएको हो भने एस–टेन प्लसको ब्याट्री चाहिँ २५ घण्टासम्म टिकेको छ । अर्थात सामसुङ आइफोन भन्दा एक घण्टा बढी समयसम्म अन रहन सफल भएको परीक्षणको निष्कर्ष छ ।
फेसबुक, एप्पल, गुगलसहितका कम्पनीले दुई दिनमै किन गुमाए सबा दुई खर्ब डलर ?
ट्रमाबाट शिक्षण अस्पताल पुगे डा. केसी, अनसन जारी
सिपाडोलमा ५६ जनाले गरे रक्तदान
आईपीएल : चेन्नईको लक्ष्य लगातार जित
अर्जुन कपुरले प्लाज्मा दान गर्ने
आज थपिएका १ हजार ३५६ जना संक्रमित (विवरण सहित)